Hetsika sy matoatoa marobe ao amin'ny Ghostbusters mamerina | Androidsis
Hetsika maro no miandry anao ao amin'ny Ghostbusters, navoakan'i Sony sy i Activison amin'ny Android
Esa horonantsary angano 80s izay nitondran'ireo mpihetsiketsika efatra taminay ny hetsika tsy misy ahiahy sy mahafinaritra indrindra ho an'ny sarimihetsika izay nanana matoatoa sy hafahafa tamin'ny ankamaroan'ny teti-dratsy. Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis ary Ernie Hudson dia nametraka ny akanjon'izy ireo hiakanjo an'io traikefa nahafinaritra io izay lasa iray amin'ireo sarimihetsika angano tamin'ny taona 80. Ankehitriny dia manana izany indray isika fa amin'ity indray mitoraka ity fa tsy lehilahy mahery fo, dia lasa izy ireo ho an'ireo vehivavy mba hanandrana hanome azy io fihodinana ity izay efa mandray tsikera noho ny tsy fahalalana ny fomba hisamborana izay Ghostbusters tany am-boalohany.
Ao amin'ny Android dia efa azontsika atao ny tsarovy ny traikefa nahafinaritra indrindra miaraka amin'ireo mpandray anjara efatra amin'ny famerenanana indray ao Ghostbusters: Slime City, lalao video mifantoka amin'ny mpitifitra iray izay manana famaranana lehibe amin'ny sary sy kisarisary mipoitra manerana ny tanàna tototry ny matoatoa adala. Ny iray amin'ireo fahalianana amin'ity lohateny ity dia ny zava-nitranga taorinan'ny aseho amin'ny sarimihetsika, ka ny filalaovana azy dia hahafahanao mandingana ireo mpanimba taloha. Handray ny andraikitry ny ekipa rookies ianao, izay manana andraikitra amin'ny fikarakarana ireo fiantsonana ao an-tanàna raha toa kosa ireo mpiara-miasa aminy malaza kokoa manao asa malaza kokoa manerana ny firenena.
1 Horonantsary fihetsiketsehana tanteraka
2 Fanandramana fiaraha-miasa iray manontolo
Horonantsary fihetsiketsehana tanteraka
Inona ny lalao amin'ny Android, saika hitantsika fa manome ny habe hitondrana antsika izany rivo-piainana manokana fa ny sarimihetsika dia manolotra amin'ny lalao voalohany lalaovinao, ka efa nahavita zavatra betsaka mialoha izy ireo. Azonao atao ny misafidy ny iray amin'ireo mpandray anjara efatra amin'ny sarimihetsika hitafy ny akanjony ary manandrana miatrika ireo matoatoa isan-karazany izay hanandrana hanao zavatra sarotra be ho anao ka ny tanjona tratrarina dia bebe kokoa sarotra tratrarina.
Ny tantara dia mametraka antsika alohan'ny tanànan'i New York izay tototry ny hetsika paranormal Ary amin'ny maha-mpanafika vaovao anao dia tsy maintsy mametraka tanana ianao hiasa hamonjy ny tanàna sy ny olombelona araka ny ahalalantsika azy. Azonao atao ny mamorona ny ekipanao manokana, manangona ny ekipanao proton, mamorona ny ekipanao Ghostbusters ao Manhattan ary misambotra ireo matoatoa ireo hahazoana valisoa tsy mampino.
Fanandramana fiaraha-miasa iray manontolo
Ny iray amin'ireo antsipiriany izay ananan'i Ghostbusters dia izany afaka miara-miasa amin'ny ekipa ianao Ghostbusters an'ny mpilalao hafa amin'ny traikefa iaraha-miasa tsy misy ifandraisany mba handresena ireo matoatoa rehetra manenika ny arabe ao an-tanàna. Azonao atao ny manatsara tsikelikely ny foiben'ny Ghostbusters anao hitahiry ireo matoatoa matanjaka indrindra.
Avy amin'ny sarintany no hanananao ny iraka rehetra hanatanterahana izany ary koa hahazo fitaovana tsara kokoa. Ny iray amin'ireo mampiavaka azy dia azonao atao mamorona kit proton anao manokana amin'ny alàlan'ny fampiasana sombin-jatony an-jatony ary ny tena marina dia eto no nokapohan'izy ireo tamin'ny lohany ny fantsika hanolotra fitambarana maro samihafa.
Ghostbusters dia afaka maimaimpoana avy amin'ny Play Store miaraka amin'ny micropayments mazava ho azy ary manana atiny betsaka atolotra. Misongadina izy, tsy isalasalana, ny lafiny multiplayer rehetra amin'ny lalao fiaraha-miasa, na dia tsy hiaraka aza izany.
Manasongadina sary sy sary mihetsika ho an'ny lalao hetsika izay maka fomba fitifirana ka mila mahazo tsara izany ekipa proton izany ianao. Ny loko ananan'ny tsirairay amin'ireo matoatoa, ny famolavolana ny endri-tsoratra na ny fiatraikany amin'ny fitaovam-piadiana miaraka dia manome fahafinaretana an-tsary mahafinaritra ho an'ny lalao video iray izay azo lalaovina amin'ny mombamomba ny terminal samy hafa arakaraka ny fitaovany. Raha sarimihetsika tamin'ny taona 80 ianao, Ghostbusters dia adidy hametraka.
Na dia ho an'ny lohahevitra hafa aza, Manoro hevitra an'i Battlehand aho amin'ny fananana endrika sary mitovy amin'izany.
Ny fisehony sary
Izahay dia tsy afaka mampiasa protas amin'ny sarimihetsika voalohany
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Hetsika maro no miandry anao ao amin'ny Ghostbusters, navoakan'i Sony sy i Activison amin'ny Android
Play Music dia nohavaozina ho 6.11 miaraka amin'ny bokotra "play" amin'ny albums ary hanampy timer tsy ho ela